Madaxweynaha Jubbaland oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Dhuusamareeb - Tilmaan Media
Madaxweynaha Jubbaland oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Dhuusamareeb
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” iyo wafdiga uu horkacayo oo ka soo kicitimay magaalada Kismaayo ayaa waxaa si weyn loogu dhoweeyay garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug.
Wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ( Qoor Qoor) iyo qaar ka mid ah Golihiisa Wasiirada iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Wafdigan oo ka mid ah madaxda ka qeybgalaysa shirka ay madaxda dowlad goboleedyada ku yeelanayaan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa soo dhoweyntooda ka qeybqaatay ciidamo saaka soo gaaray magaalada Dhuusamareeb kuwaasoo ah ilaalada gaarka ah ee Madaxweynaha Jubbaland.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ah madaxweynihii ugu dambeeyay ee soo gaara magaalada Dhuusamareeb ee ah madaxda dowlad goboleedyada ee ka qeybgalaya shirka madaxda dowlad goboleedyada.
Matxafka Aayasoofiya Masjid malagu celin doonaa?
Raysalwasaare Khayre oo markale adkeeyay in aan muddo kororsi lasamayn oo doorashadu xilligeeda ku dhacdo